Fabinho oo seegi doona labada kulan ee soo socota Liverpool
Home Horyaalka Ingiriiska Fabinho oo seegi doona labada kulan ee soo socota Liverpool
Ciyaaryahanka khadka dhexe Fabinho ayaa qarka u saaran inuu seego labada kulan ee soo socota Liverpool isagoo dhaawac ah laakiin waxaa laga yaabaa inuu ku soo laabto kulanka muhimka ah ee ay wajahayaan Manchester City.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil ayaa buuxinayay booska daafaca dambeedka dhexe caawiye ka ah maqnaanshaha mudada dheer ee Virgil Van Dijk iyo Joe Gomez laakiin waxaa dhaawac muruqa ah ku seegay kulankii Khamiista ee Tottenham.
Inkasta oo dhibaatada uu ku tilmaamay inay tahay “mid yar” macallin Klopp haddana wuxuu rajaynayaa in 27 jirkan uu seegi doono safarka West Ham iyo booqashada Arbacada ee Brighton.
Previous articleSergio Ramos oo diyaar u ah inuu ka tago Real Madrid kuna biiro Manchester United.
Next articleThomas Tuchel oo dalbanaya in loo keeno Erlling Haaland.